Jubaland maxay ka tiri ciidanka 'u goostay dhinaca dowladda Federaalka'? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Jubaland maxay ka tiri ciidanka ‘u goostay dhinaca dowladda Federaalka’?
November 8, 2019 at 14:44 Jubaland maxay ka tiri ciidanka ‘u goostay dhinaca dowladda Federaalka’?2019-11-08T14:44:23+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Maxamed Cabdi Muuddeey oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada sheegay inay goosteen ayaa BBC-da u sheegay in tallabada ay qaadeen uu sabab u ahaa “isfaham waa dhex maray iyaga iyo maamulka”.
Arrintan ayaa kusoo aaday xilli uu dhawaanahan sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas’uuliyiinta dowladda Dhexe iyo kuwa Jubbaland.
“Waxaan isku fahmi weynay qorshe ku saabsan in ciidammada joogay Beledxaawo loo qaado dhinaca gobolka Waqooyi-bari, Kenya, annaguna waan kasoo horjeedsannay arrintaas, waayo ma dooneyno in marba dhinac naloo wado oo aan ka shaqeyno wax aan danaheenna ahayn”, ayuu yidhi muudeey.
Wuxuu intaasi ku daray inay ka goosteen Jubbaland, ayna ku biireen dowladda Federaalka.
“Hadda waxaan si toos ah u hoos tageynaa dowladda dhexe, markii ugu horreysayba waxaan ahayn ciidamada dowladda Federaalka, ka hor inta aan la aasaasin Jubbaland”, ayuu yidhi.
Hase ahaatee, BBC-du ma xaqiijin karta sheegashada sarkaalkan ee ah qorshaha ciidanka loogu qaado dalka Kenya, ee dariska la ah Soomaaliya.
Wax war ah ma aysan soo saarin Kenya, noomana suurtagalin inaan ka helno jawaab.
Sidey arrintan uga jawaabtay Jubbaland?
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay aya qiray jiritanaka cidammada baxsaday balse sheegay inaysan ahayn “wax weyn”.
“Horta Beledxaawo, Luuq iyo Doolow waxaa jooga hal ciidan, oo ah ciidanka Soomaaliyeed, oo ammaanka ilaaliyo, oo waajibaadkiisu uu yahay la dagaallanka Al-Shabaab. Waxaa jira ciidan dhallinyaro ah, oo ka tirsanaa ciidankii Beledxawo oo aaday magaalada Luuq, iyaguna waxay u tageen ciidankoodii kale oo jooga Luuq, wax dhib ah oo ka taaganna ma jiro, mar walbana way dhacdaa in ciidan meel lagu ogaa ay si amar la’aan ah ama sabab la xiriirta khilaaf dhex mara iyaga iyo madaxdooda uga tagaan xarumahoodii, marka ma aha wax weyn ama sida ay idaacaduhu u dhigayaan, meel ay ka baxsadeen iyo cid ay u baxsadeen midna ma jirto”, ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka Jubbaland.
Waxaa soo baxayay warar sheegaya in guddoomiyeyaashii Beledxaawo, Luuq iyo Doolow ay aadeen dhinaca dalka Itoobiya.
Maxamuud Sayid Aadan oo arrintaas ka hadlyay ayaana yidhi: “Xuduuddaas dheer ammaankeeda waxaan iska kaashannaa deegaannada dariska nala ah, ama Kenya ha ahaato ama Itoobiya ha ahaato, saraakiisha amniga iyo maamulladaba waxaa ka dhaxeeya kulamo bishiiba mar la isugu tago oo lagu qiimeeyo arrimaha ammaanka”.
Khilaafkan ayaa dhinaca kale wiiqay xiriirkii dowladaha Kenya iyo Itoobiya, gaar ahaan wadashaqeyntooda dhinaca milatariga ee qeybta ka ah howlgalka midowga Africa ee Soomaaliya(AMISOM) iyadoo Kenya ay taageertay doroashada Axmed madoobe halka Itoobiyana la aaminsan yahay inay taagersan tahay mowqifka dowladda federaalka ah.
« RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii October ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Somali Government praises Qatari aid to flood affected people »